Piper's Rise Foreword — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ကြည့်ဖို့ဒါအများကြီးပိုရှိပါတယ်, သိရန်, ချစ်ဖို့, ခံစား. သူတို့ပျော်စရာလျှော့ချမရနိုင်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရပ်မှန်များရှိပါတယ်. သူ၏စကား "ပျော်စရာ" "ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်" "ဘောလုံး" "ပါတီ" ကိုအကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်အများဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များ၏ရှေ့တော်၌အမိုက်သံ. စစ်မှန်တဲ့တန်ခိုးအာနုဘော်အဘို့ငါတို့အရသာဘူးသီးသေဆုံးသွားကြပြီဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေါဟာရ "ပျော်စရာ" ရန်ကိုလျှော့ချခဲ့.
ခရီးစဉ်ကပြောပါတယ်, "ကငျြ့တရားမှကြွလာသည့်အခါ, ကြှနျုပျတို့အားလုံးမကောင်းတဲ့အရသာရှိသည်။ "ဟုတ်တယ်. ထိုအခါငါတို့သည်နောက်အရသာရှိကိုဘုရားသခင်အားကြောင့်ကြွလာသောအခါ. ခရီးစဉ်ကပြောပါတယ်အဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုအကြောင်းပြောဆိုလာသောအခါမျက်စိဖွင့််လင်းရန်အဘို့အ "ဒါဟာဘုံင်, ဒါပေမဲ့ယဉ်ကျေးမှု၏ငါတို့သည်ခရစ်တော်ကိုအကြောင်းပြောဆိုကြသောအခါကျော် glaze ။ "ဒီတောင်ကုန်းပျော်စရာဖြစ်ကြ. ခရစ်တော်၏ဟိမဝန္တာမောများမှာ.
ခရီးစဉ် Lee ကသငျသညျသိစခေငျြ: တောင်ကုန်းထက်ပိုရှိပါတယ်. တောင်မှငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ပိုပြီးလည်းမရှိ. ဤစာအုပ်ငယ်သောသူတို့အဘို့ကျမ်းစာ၌လာသည်ကား. ဒါဟာသူတို့အထောက်အကူပြုရန်အနည်းငယ်သာရှိခံစားရသောသူတို့အဖို့မြျှောလငျ့ခပေးရကျမ်းစာလာသည်. ဒါဟာလူငယ်တစ်ဦးသညျဘုရားသခငျအရာအားလုံးအပြောင်းအလဲများ၏ဘုန်းအသရေကိုမြင်သောအခါသောခံယူချက်နှင့်အတူကျမ်းစာလာသည်. သူတို့ဟာထလော့!
သို့သော်ထိုစာအုပ်ရင့်ကျက်သည်. ဒါဟာရင့်ကျက်နျဖိုးထားတ. ဒါဟာအသက်အရွယ်လေးစားသော. ခရီးစဉ်အသက်တော်နှစ်ပေါင်းကိုကျော်လွန်ပညာရှိဖြစ်၏. သူဟာနှစ်ပေါင်းသင်ပေးသောအရာကိုပြီးသားရှုမြင်. တိုင်းအသက်ရှုလက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်. တိုင်းအခိုက်တစ်ဦးယုံကြည်မှု.
"အချိန်ဖြုန်းတီးနေရူးသည်. ဒါဟာပိုက်ဆံမီးလောင်တူရဲ့. တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်သင်ပိုမိုပိုက်ဆံစေနိုင်သည်ဖြစ်ပါသည်, သင်မူကား, အခြိနျပိုပါစေဘယ်တော့မှနိုင်ပါသည်။ "
ငါရေတွက်သောအရာကိုတစ်ဦးရိုကဒီခေါ်ခြင်း. ဘဝကအဖိုးတန်သည်. ထိုအခါအတို. ခရီးစဉ်မှတ်အဘယျအဘို့အအသက်ရှင်ဖို့သင်ခေါ်ဆိုသည်. နေရခြင်းအသက်ရှင်ရန်, ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်. ရီစရာ ကျော်လွန်.. အေးမြခြင်းနှင့်လိမ္မာပါးနပ်ထက် ကျော်လွန်..
ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေထဲသို့ဟိမဝန္တာလမ်းခရီးပေါ်မှာထရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ချော်လမ်းကိုသိနှင့်မရမယ်. "တိမ်ပိုင်းလုပ်ကွက်မြစ်များကိုတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်းခြေဦးဆောင်, ကျွန်တော်တို့ရပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နက်ရ​​ှိုင်း။ "ခရီးစဉ်သွားရန်ရှိသည်ကုမ္ပဏီရှိသငျသညျကိုဦးဆောင်သည်. မြင့်မားသွားနိုင်ရန်အတွက်သူနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသွားပါ. တက်.
MicahKelley • ဇန္နဝါရီလ 26, 2015 တွင် 8:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာရှေ့ကိုတကယ်ကောင်းလှ၏ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်တစ်ချိန်ကငါမျှော်လင့်ပါတယ်, သခင်ဘုရား၌ သာ. ကြီးမြတ်ထွဋ်နှင့်ပိုမိုနက်ရှိုင်းနက်နဲရာမှထ.
Cristella • ဇန္နဝါရီလ 26, 2015 တွင် 10:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ChriseldaDirrim • ဇန္နဝါရီလ 26, 2015 တွင် 12:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
က Nicholas theron လယ်ပြင် • ဇန္နဝါရီလ 26, 2015 တွင် 1:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါပိန်သောကာလ၌အဘယ်သူမျှမမှတ်ရှိပါတယ်သဘောတူ. သို့သော်သင်၏အချိန်ကိုခံစားဖို့မေ့လျော့ကြဘူး. ပျော်စရာရှိခြင်းကိုသင်ပျော်စရာရှိသည်ယင်း၏ဘယ်လိုမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး. သင်သည်သင်၏အပျြောအပါးတစုံတယောက်သောသူသည်အခြားရဲ့နာကျင်မှုကနေရကြဘူး. နာကျင်နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှခိုးယူသင်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပျော်မွေ့ပေးပါသလား. နှိမ့်ချဘုရားအပေါ်အခြားသားကိုင်ဆောင်ထားဘူး. ပေါ်သယ်ဆောင်ရန်သင့်အားအစှမျးသတ်တိကိုပေးပါဘူး. သငျသညျလူကိုခံစားမှုပေးပါဘူး. တကယ့်လူကိုဖြစ်ခြင်း. မှားအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်ဘို့ဝန်ကိုသင်၏အသက်တာကိုမျက်စိကန်းသောသင်စွန့်ခွာသောအရာတို့ကိုပြုပြင်တာတွေဖြစ်ပါတယ်. တရားကိုဟောပြောဖို့မဘုရား၏အခြားသားပြောနေမှားယွင်းနေသည်. သို့မဟုတ်မနာသီချင်းဆိုဖို့မ. သို့မဟုတ်သင့်ဝိညာဉ်ရေးရာလမ်းလျှောက်များ၏နက်ရှိုင်းမဲမှောင်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်သင်ကူညီနိုင်ဖို့ခွန်အားရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်အချို့သောတဦးတည်းအနေဖြင့်အပြေး. သင့်ရဲ့သက်သေခံချက်. သင်ပြုသကဲ့သို့သင်တို့နီးကပ်နှင့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဘုရားနောက်တော်သို့လိုက်အကြောင်းပြချက်. ကျနော်တို့တပါးသောဘုရားတို့ကိုအစီအစဉ်၏အတိမ်အနက်ကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကို run. ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာထဲတွင်အမှန်တကယ်နာကျင်. ကိုပြောသည်ရရှိဘယ်တော့မှသောပုံပြင်. ဘုရားသခငျသညျပျောက်ဘို့ လာ. ,. ကျိုးပဲ့အဆိုပါ. အဆိုပါကြောက်တယ်. အဆိုပါပြစ်တင်ရှုတ်ချ. အသိဉာဏ်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါစိတ်. သို့သော်တသမတ်တည်းသူတို့ကောင်းသောအရာမများမှာပြောသည်နေကြတယ်. တော့ဘူးနောက်ဆုံးအဘို့သင့်ကိုအကောင်းဆုံးကယ်တင်မနေပါနဲ့. ဘုရားသခငျသညျကွှလာ. ကျနော်တို့ရက်စွဲမသိရပေမဲ့သူလာမယ့်နေသည်. သူမရသောအခါသူသညျအမှနျတကယျမှန်ရာကိုသိတယ်ကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အရှင်ကိုကွောကျရှံ့ပါလိမ့်မယ်. သူသည်အကောင်းဆုံးအရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်. ယင်း၏အချိန်ဘုရားသခငျသညျကောင်းကြီးပေးတော်မူသောအခါ, ငါသည်သင်၏အစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ပါလိမ့်မယ်.
ယောဟနျသခနျ့အပျ • ဇန္နဝါရီလ 27, 2015 တွင် 5:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! ဒါဟာတကယ်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်, ကိုယ့်ငါမိတ္တူစောင့်ဆိုင်းမနိုင်. ခရီးစဉ်ကို, နိုငျငံတျောသညျမှသင်၏ဝန်ဆောင်မှုပိုမိုကျေးဇူးတော်နှင့်ထွက်သော!
Burton • ဇန္နဝါရီလ 27, 2015 တွင် 4:53 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ငါ့နေရာအရပ်မှမရ-အမိန့် Pre မိတ္တူစောင့်ဆိုင်းမနိုင်! သငျသညျကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့တူလူငယ်ကိုကူညီမယ့်စာအုပ်ရေးသားခြင်းများအတွက်ခရီးစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
ဖေါ်ပြ: music ကိုတနင်္လာနေ့ – ခရီးစဉ် Lee ကမြင့်တက် | အမှန်တရားန်ကြီးဌာန၏မဏ္ဏိုင်